မန်းသားလေး| February 20, 2013 | Hits:14,180
ထိုင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့် ဖူးခက် ကမ်းခြေမှ ပြည့်တန်ဆာများပုဂံကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းတင်သွင်းဖို့ ပြင်ဆင်တော့မည်ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာတချို့ ရိုက်နှက် စစ်ဆေးခံရနှစ် ၁၀၀ ပြည့် ချင်းချောင်းနန်းတော်ကို ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ကို မဲဆောက်သို့ ပြန်ပို့
Shwe Thway February 20, 2013 - 11:43 pm I hope the king is found and go home peacefully. Many Thais are still mad at the Burmese because of cruel treatment their ancestors received from the invading Burmese. Even though the Thai-Burma relation is good today, Burmese junta is practicing the same treatment to ethnic peoples in Burma. The junta must abolish this practice and never practice again to any other human beings. Cruelty has no place in this age and century. I am glad the Siamese king is heading home soon after 200 years in exile. His spirit may be so amused and smiling.
Reply ml February 21, 2013 - 3:34 am တကယ်လို့ ဂူက ဟုတ်မှန်နေခဲ့ရင် ထိုင်းဘုရင် ကံကောင်းတာပေါ့လေ။ အနှစ် ၂၀၀ ကျော်ကြာပြီးမှ ပြန်ပြီး ဂုဏ်အပြုခံ၊ လူတွေ တလေးတစား လာကြည့်တာ ခံရတော့မယ်။ ပို ကံကောင်းရင် သူ့အရိုးပြာ ပြည်တော်ပြန်ခွင့် ရဦးမယ်။ တခြားလူတွေ သည်လို သေကံကောင်းကြတာ မဟုတ်ဘူး။
Reply ukyawt February 21, 2013 - 1:47 pm i’m glad to dig like that by thais.if it is true we should give them to the ash or some thing.i know they hate us what we treat long age.the winner is the loser, you must know.what i want to tell is we should not have the debt on thai.clean ourselves and go to the future in cleaning..we have examples in the world history…learn by heart…
Reply မင်းကြီးညို February 23, 2013 - 7:42 pm ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ နယ်ချဲ့ခေတ်တွေမှာ ဒီလိုပါပဲ။ စစ်နိုင်တဲ့ဘုရင်က စစ်ရှုံးတဲ့ဘုရင်ကို သုံ့ပန်း